Xulka Argentina oo ku guuleystay kaalinta saddexaad ee Copa America kaddib markii ay garaaceen Chile, xilli Lionel Messi kaarka cas loo taagay – Gool FM
Real Sociedad oo taako u dhigtay kooxda Barcelona…+SAWIRRO
Bournemouth oo saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Chelsea & dhamaan natiijooyinka kulamadii laga ciyaaray Premier League…+SAWIRRO
Xulka Argentina oo ku guuleystay kaalinta saddexaad ee Copa America kaddib markii ay garaaceen Chile, xilli Lionel Messi kaarka cas loo taagay
Haaruun July 6, 2019
(Brazil) 06 Luulyo 2019. Xulka qaranka Argentina ayaa caawa ku guuleystay kulankii kaalinta saddexaad ee Copa America 2019, kaddib markii ay 2-1 kaga adkaadeen Chile, xilli Lionel Messi uu guddoomay kaarka guduudan.
Argentina ayaa goolasha la horreysay waxaana goolka koowaad u dhaliyey 12’daqiiqo Sergio Aguero, kaddib caawin uu ka helay Lionel Messi, Chile ayaana lagu hoggaamiyey 1-0.
Intii lagu guda jiray qeybta hore ee ciyaarta markale xulka Argentina ayaa shabaqa soo taabtay kaddib markii 22’daqiiqo uu goolka labaad u saxiixay Paulo Dybala oo caawin ka helay Giovani Lo Celso.
Dhammaadkii qeybtii hore ee ciyaartan ayaa kaarka cas loo taagay labada ciyaaryahan ee ka kala tirsan labada xul ee Chile iyo Argentina, Gary Medel iyo Lionel Messi kaddib markii ay xaalad dagaal ka abuureen kulanka, ciyaarta ayaana lagu kala nastay 2-0 ay ku gacan sarreeyeen xulka Argentina.
Lionel Messi ayaa caawa garoonka laga saaray oo kaarka cas la tusay markiisii labaad ee xirfaddiisa ciyaareed.
Labada casaan ee la siiyey Lionel Messi waxa uu qaatay isagoo u ciyaaraya xulkiisa Argentina, waxaana la kala siiyey sanadaha 2005 iyo 2019.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay iyadoo labada xul ku ciyaarayey min 10 ciyaaryahan ayaa xulka Chile waxa ay iska soo gudeen hal gool, waxaana rigoore lagu abaal-mariyey xulkaas gool u rogay 59’daqiiqo Arturo Vidal.
Yeelkeede, goolka uu dhaliyey Vidal guuldarro kama badbaadin Chile, xulka Argentina ayaana ku adkaaday 2-1 sidaasna ugu guuleystay kaalinta saddexaad ee Copa America.
Kulanka final-ka Copa America 2019 waxaa wada ciyaari doona xulka marti-gelinaya sanadkan tartanka ee Brazil iyo weliba dhiggooda Peru.
Faah-faahinta heshiiska uu Theo Hernandez ugu biiray kooxda AC Milan
Xulka South Africa oo iska xaadiriyay siddeed dhamaadka koobka qarammada Afrika, kaddib markii ay reebeen marti-geliyeyaasha tartanka ee Masar … + SAWIRRO